“Pep Guardiola wuxuu naga mamnuucay inaan Galmo sameyno wixii ka dambeeya saqda dhexe.”. Samir Nasri – Gool FM
“Pep Guardiola wuxuu naga mamnuucay inaan Galmo sameyno wixii ka dambeeya saqda dhexe.”. Samir Nasri
Byare November 15, 2016
(Spain) 15 Nof 2016. Weeraryahanka Man City ee amaahda ku jooga kooxda Seville ee dalka Spain Samir Nasir ayaa sheegay in Pep Guardiola uu ka mamnuucay kooxda ka arrimisa Etihad Stadium inay galmo sameeyaan waxii ka dambeeya saqda dhexe habeenkii 12:00 habeenimo, isagoona intaa raaciyay in sababtaas ay tahay mida uu tooda ugu fiican uga soo dhalaaliyay Lionel Messi iyo Robert Lewandowski markii uu tababaraha u ahaa.
“Isaga ahaan (Guardiola) haddii ay ciyaartoydiisa galmo rabaan waa inay noqotaa wixii ka horreeya saqda dhexe si ay u helaan habeen hurdo wacan xitaa haddii ay subaxaa free yihiin oo ay shaqo lahayn,” Nasri ayaa sidaa u sheegay jariiradda reer France ee L’Equipe.
“Xitaa sharcigan ah inaan galmo la sameyn karin wixii ka dambeeya saqda dhexe wuxuu Guardiola ku oogay Lionel Messi wixii markaa ka dambeeyayna murqihiisa way sii fiicnaanayeen.”.
Nasri ayaa sidoo kale sheegay in Guardiola uu ku wargaliyay inuusan boos joogta ah u hayn markii uu fasaxa ka soo laabtay kaddib markii uu soo cayilay.
“Wuxuu ii sheegay Guardiola inaan nidaamsanayn, marar badan ayuu ii sheegay xitaa dabada ayuu iga laaday.
“Markii aan ka soo laabtay fasaxa aana qaatay sanad dhibaato dhaawacyo iyo mid shaqsi ahaaneedba, xoogaa qaabka ayaa iga lumay, ma ahan si u badan sida loo yiri laakiin xoogaa, afar kiilo ayaa igu darsantay, Guardiola haddii ay kugu darsanto 2.5 kiilo, kooxda lama tababaraneysid.
David Silva oo shaki laga muujinayo kulanka caawa ee Spain iyo England...(laacibka oo kabo la'aan...)
Inter Milan oo Jannaayo malaayiin ku raadinaysa Lucas Biglia